Nagarik News - बर्मुडामा के गरिरहेको छ नेपाली क्रिकेट टोली ? (साथमा फोटो फिचर)
बर्मुडामा के गरिरहेको छ नेपाली क्रिकेट टोली ? (साथमा फोटो फिचर)
27 Apr 2013 | 18:41pm
काठमाडौं - बर्मुडामा भोलिदेखि सुरु हुनेविश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ३ मा लागि नेपाली टोली अभ्यासमा व्यस्त छ । नेपालका श्रीलंकाली प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकको प्रशिक्षणमा नेपाली टोलीले दरिलो मेहनत गररिहेको छ । नेपालले आइतबार अमेरिकासँग खेलेर डिभिजन ३ को प्रारम्भ गर्दैछ । डिभिजन ३ विश्वकप २०१५ को छनौटको आधार पनि हो । डिभिजन ३ मा नेपाल, बर्मुडा र अमेरिका सहित इटाली, ओमान र युगान्डा पनि खेलिरहेका छन् ।
एकदिवसीय विश्वकप अनुभव बोकिसकेको बर्मुडा र मिनी विश्वकप खेलिसकेको अमेरिकासँग नेपालले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यस बाबजुद नेपाललाई प्रतियोगिताको दाबेदार मानिएको छ। सबै तस्बिरहरु सौजन्य: नेपाल क्रिकेट संघ
क्रिकेट टोली भोकभोकै (साथमा फोटो फिचर)
शक्तिको १०० विकेट
बर्मुडाविरुद्ध नेपालको शानदार जीत
नेपाल अमेरिकासँग ९४ रनले पराजित